ရေစိုခံ Switch Socket၊ Wall Switch Socket၊ Floor Socket - Ohom
အသိဉာဏ်ရှိသော အလိုအလျောက်စနစ် ပေါ်လာသော ပလပ်ပေါက် Operat...
IP66 WiFi smart Home ရေစိုခံပေါက်ပေါက်
WiFi စမတ် ရေစိုခံ ပလပ်ပေါက် USER GUIDE
RCD + ပေါင်းစပ်ခလုတ်နှင့် UK socket 86 အမျိုးအစား...
ဂန်ဂျာမန်(EU) ပေါက်ပေါက် 1 ခု
OHOM လျှပ်စစ်အဓိက အရည်အချင်းများသည် ရေစိုခံခလုတ်နှင့် ပလပ်ပေါက်၊ ကြမ်းပြင်ပေါက်ပေါက်၊ နံရံခလုတ်နှင့် ပလပ်ပေါက်၊ ပြင်ပရေစိုခံအားသွင်းကော်လံနှင့် ကြွေပြားများအဆင့်ခြင်းစနစ်တို့ ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ အင်ဂျင်နီယာပရောဂျက်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တည်ငြိမ်သော ရေစိုခံပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အရှေ့တောင်အာရှနှင့် ဥရောပနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့သော နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရောင်းချပါသည်။ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသိများသောပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပထုတ်လုပ်သူများမှသတ်မှတ်ထားသော သမဝါယမ ပံ့ပိုးပေးသော OEM နှင့် ODM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာပါသည်။ ၎င်းကို လူနေအိမ်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစင်တာ ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်များနှင့် အလင်းရောင်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သည့်နေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
IP66 ရေစိုခံခလုတ်နှင့် ပေါက်ပေါက်အသစ်
IP66 ရေစိုခံခလုတ်နှင့် ပေါက်ပေါက်
IP55 ရေစိုခံခလုတ်နှင့် ပေါက်ပေါက်
qi ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာပါရှိသော မော်တော်ဆိုင်ကယ် ပေါ်လာသောပေါက်ပေါက်
1. လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်- ထုတ်ကုန်တက်လာသောအခါတွင် အဝိုင်းခလုတ်ကို3စက္ကန့်ကြာအောင် ဖိထားနိုင်သော3စက္ကန့်ကြာ လျှပ်စစ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် အပြည့်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမည်ဖြစ်ကာ ထုတ်ကုန်များ၏ မတော်တဆ ထိမိခြင်းအတွက် ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်...
ရေစိုခံခြင်းနှင့် ဖုန်မှုန့်ခံနိုင်သော ခလုတ်ခုံများ၏ အဆင့်များကို မည်သို့ခွဲခြားထားသနည်း။
21-01-21 ရက်နေ့တွင် admin မှ
IP44 ၏ ရေစိုခံပြီး ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော အဆင့်သည် IP66 ထက် နိမ့်သည်။IP ကာကွယ်မှုအဆင့်သည် dao နံပါတ်နှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ပထမနံပါတ်သည် လျှပ်စစ်ဖုန်မှုန့်နှင့် ပြင်ပအရာဝတ္ထုများ ဝင်ရောက်မှုအဆင့်ကို ညွှန်ပြပြီး ဒုတိယနံပါတ်က လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် အစိုဓာတ်ခံပြီး wat...
admin မှ 20-06-08 ရက်နေ့တွင်
IP66 စီးရီးတွင် နံရံကပ်ရေစိုခံခလုတ်နှင့် ပလပ်ပေါက်တွင် IP66 ရေစိုခံသေတ္တာ အမျိုးအစား4ခုပါရှိပြီး6စီးရီးလုပ်ဆောင်ချက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လက်ခံရန် ဘက်စုံသုံးဆော့ဖ်ဝဲ၊ BS ပေါက်ပေါက်၊ Schuko ပေါက်ပေါက်၊ ပြင်သစ်ပလပ်ပေါက်၊ တောင်အာဖရိက ပလပ်ပေါက်၊ အုပ်စုလိုက်ခလုတ် ၁ ခု၊ အုပ်စုလိုက်ခလုတ် ၂ ခု အပါအဝင် Function Accessories များအားလုံးကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်..။
1. အားသွင်းပုံသည် မည်သည့်ထောင့်တွင်မဆို ပက်ဖြန်းထားသောကြောင့် ရေစိုခံနိုင်သောကြောင့် အလယ်အလတ် သို့မဟုတ် မိုးအလင်းတွင် ရေဝင်ရောက်မှုပြဿနာအတွက် စိတ်မပူပါနှင့်။2. အားသွင်းပုံသည် ယိုစိမ့်မှု ကာကွယ်ရေး ကိရိယာကို တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ယိုစိမ့်မှု တွေ့ရှိပါက ၎င်းသည် အလိုအလျောက် ပါဝါဖြတ်တောက်ပြီး အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။3.The ourdoor ရေစိုခံ...